U-Eldar Lebedev - ubomi bomntu, umfazi, abantwana, intsapho, iifoto ezisuka kwi-Instagram. I-biography yomdlali we-actor Eldar Lebedev
Ubomi kunye nobomi bomntu u-Eldar Lebedev. Iifoto eziqhelekileyo zomfazi nendodana
Ngaphezulu kwekota yeshumi leminyaka edlulileyo, kwi-kindergarten enegama elingenakuthobeka "Ugolyok" kwisixeko saseKaraganda, ootitshala babona phakathi kweenkwenkwezi ezenyukayo-inkwenkwezi enoLek.
Umculi omncinci onomdla wayengumntu ongenakwenzekayo kuwo onke amabhinqa. Abantu abadala, abathinteka ngamakhono okudala webhokhwe enesipho, baprofeta kuye kwimeko eqaqambileyo kunye nekamva elihle. Kwaye abazange baphoswe.
U-Eldar Lebedev ebuntwaneni bakhe
Emva kokuba unolwazi olusesikweni namhlanje owaziwa ngathi njengomdlalo weqonga kunye nomdlali wefilimu u-Eldar Lebedev, obomi bakhe abuphi ukuphumla kwezihlwele zabalandeli bakhe abazinikeleyo. Wayekwazi njani ukufikelela eziphakamileyo? Ngaba u-Eldar Lebedev unentombi okanye umfazi? Yintoni ephawulekayo malunga ne-biography yomntu owaziwayo?
U-Eldar Lebedev: Ubomi luhamba
U-Eldar Lebedev, ukususela ebuntwaneni, akazange afune ukukhathala kwaye ahambe kunye nokuhamba. I-credo yendoda ethandekayo edumile kunye nentombikazi yentliziyo: "Ubomi luhamba".
U-Eldar Lebedev esemncinci
Ukuba ngumntwana wesikolo, umculi okhulayo uyaqonda ukuba impumelelo ifike kubantu abadlulileyo phambi kobunzima. U-Eldar oneminyaka engama-6 ubudala ebenomdla ngokugqithisa ibhola, ngokukhawuleza ukufundela ngokubambelela, ngokukhawuleza wayesebenzisa isixhobo somculo. Ngeentsuku zesikolo zokuzilawula ngokwasemakhwenkwe kunye novuyo oluvulekileyo, abafana banyulwe ngokusemthethweni kwisithuba "soongameli."
Kwintlanu kunye ne-plus-kwaye ngaphandle kwalokho! - Ubomi be-Creative u-Eldar Lebedev
Xa uneminyaka eyi-15, inkwenkwe enetalente yagqiba ukuba kwakuyisikhathi sokunqoba uMoscow. Amanyathelo okuqala ekudumeni nasekuthandeni u-Eldar Lebedev wenza ngexesha lokufunda kwakhe esikolweni ebizwa ngokuba ngu-MS Shchepkin-umfundi ohambeleyo wamenywa ukuba asebenze kwiifilimu. Ootitshala abanamandla abanokungavumi kwabadlali abangenazo idiploma, bathi, kufuneka uqale ukufumana imfundo, uze uqale "ukuhlazisa" abacebisi babo. Eldar, ootitshala abahloniphekileyo bayamthemba baze bamkhulula ngokudubula kokuqala. Ngethuba lokufunda kwakhe, uLebedev wakwazi ukufumana inxaxheba ebalulekileyo kwinqanaba likaSergei Lalin lokuQinisa kokugqibela.
U-Eldar Lebedev kwi-cinema
Umfundi obalaseleyo akazange alahle izifundo zakhe ezizithandayo. Ngethuba lonke ixesha lokufunda, umdlali omncinci wanikezelwa i-quartet kanye. U-Eldar Lebedev e-Instagram unokuziqhayisa ngesibonakalo ngokukhawuleza kunye nesidlo esiqhayisayo, kodwa kunye ne-diploma ebomvu.
I-Master of Reincarnation: Ngubani ngempela - umdlali we-Eldar Lebedev?
U-Eldar Lebedev uyazi kakuhle indlela yokuzama kwimifanekiso eyahlukileyo. Ulungelelwano olufanelekileyo kwindima ye-romance yasemaphandleni (uchungechunge lwe-TV "i-Apple Garden", ngo-2012), kunye "nesimo" somsebenzi onamandla (iProjekthi "oyiNtloko", 2012-2015), kunye ne "post" enkulu " Ukusebenza, 2014). Unogqirha wezingane obalaseleyo, uLeonid Roshal, nangona engacingi ukuba ngumtshisi we-sopha, xa wayexela uLebedev ngokukrakra ukuba, nokuba kukho nantoni na, ngokuqinisekileyo uya kufumana isikhala samahhala kwiyeza.
Ukususela kwi-biographie ka-Eldar Lebedev kwaziwa ukuba wayezibonakalisa ngobulumko njengombonisi, u-humorist kunye nomsunguli we-movie ekhethekileyo yefilimu eRashiya. Umdlali we-intanethi kwelinye ludliwano-ndlebe avumile ukuba umfanekiso we-"Chef" oqinileyo kwi-epaulets uhambelana kakhulu neembono zakhe kunye nomlingiswa. Nangona ulwalamano, ububele, ubudlelwane obuqhaqhazelayo nentombazana u-Eldar Lebedev ayikho mnye uhlanga.
U-Eldar Lebedev: ubomi bomntu kunye nokusebenza ngokufanelekileyo
Nangona ubukeka obunomtsalane kunye nokuthakazelisa, u-Eldar Lebedev ebomini bakhe buzama ukulungelelana nokuzinza nomfazi wakhe. Umdlali wexesha elide wayenomdla kunye nomlingane wakhe kwiworkshop uAnna Popova. Ngaphambi kokubambisana negosa kunye nepeyinti kwiofisi yokubhalisa, ityala alizange lifike. Esi sibini sasinomntwana ekuqaleni - ikopi yonyana kaPain uDaniel, kodwa abazali abaselula bahlukana. Ngomama wakhe wokuqala u-Eldar Lebedev ugcina ubudlelwane obuhle.
Umfazi wokuqala ka-Eldar Lebedev kunye nendodana
Kunyaka ophelileyo, umdlali wathandana nentombazana yamaphupha akhe - iValeria - intombi yomdlali uPavel Kabanov. Umcimbi omnandi womtshato wabanjwa ePrague.
Ifoto yomtshato ka-Eldar Lebedev
Ukuthandana kweso sibini esithandekayo saqala ukuphuhlisa emva kokubhalisa okungahleliweyo kwi-Facebook. Kwixesha elibalulekileyo likaLera "bekhompyutheni" - kwaye indoda yakhe ezayo u-Eldar Lebedev wambetha kuye. Ubomi bomntu wabantu abancinci baqala nge-slate ecocekileyo. U-Eldar noLera babengabangane nje ixesha elide, de baqonda ukuba bathandana. ULera uzuze umdlali omtsha ngokukwazi kwakhe ukunyaniseka.
U-Eldar Lebedev nomkakhe (isithombe esivela ku-Instagram)
Impumelelo ebaluleke kakhulu kwi-biographie yakhe, u-Eldar Lebedev, ucinga ngokuqhelana nomfazi wakhe kunye nokudalwa kwintsapho.
U-Eldar Lebedev kunye noKsenia Lavrova-Glinka: ingumdlalo onokusekwa?
U-Young Ilya Sokolov, onendima yakhe u-Eldar Lebedev edlale kwinqaku ethi "Yenza umsebenzi", kwisiqwenga sichaza incwadana enomfazi oneminyaka eliphakathi-oogqirha-ugqirha u-Eugene Koroleva. Ummeli uKsenia Lavrova-Glinka usebenzise ngokugqithiseleyo umfanekiso wesifo sobugqirha.
Zonke iimfihlakalo zobomi bomntu ka-Xenia Lavrova-Glinka ziboniswe apha
Abaculi babenokwazi ngokunyanisekileyo ukudlala uthando oluthile lwenethiwekhi lwaqala ukubonakala ngathi luthando phakathi kwabalingisi bokwenene ubomi. U-Eldar Lebedev uyaphikisana nayo yonke ingcamango ngobudlelwane bakhe obusondelene noKsenia Lavrovoy-Glinka. Nangona kunjalo, umlingisi uqinisekile ukuba xa kuqhutyelwa intlanzi phakathi kwendoda nomfazi, ubudala babo abukhathazeki.
Inwaba ka-Eldar Lebedev yintsapho, umfazi kunye nabantwana
Kwi-Instagram yase-Eldar Lebedev, kuneemifanekiso ezimbalwa ezithathwe kwimibutho yelizwe. U-Eldar ukhetha ukulayisha iifoto apho echazwe ngumfazi wakhe othandekayo.
"Lera wam" - ngoko ubiza umnene wakhe u-Eldar Lebedev. Ubomi bobuqu bomntu obinileyo obonakalayo, kubaluleke kakhulu, umzekelo. Umculi ubelana nabangani kunye nabalandeli ukubonakala kokuhamba nokuphumla okusebenzayo. Kuyabonakala ukuba iqhawe lethu alinandaba neentaba ezintle zeentaba kunye nolwandle.
U-Eldar uchitha ixesha elininzi kunye nendodana yakhe uDaniel. Nangona le nkwenkwe ine "yeenkwenkwezi" zegciwane, ubaba akaqinisekanga ukuba unyana uya kukhetha umsebenzi wobugcisa. UDanya uthanda iprogram, udlala i-chess, kwaye usuke eqaqa ngokuzithemba emva kweminyaka emine. Umculo kunye nemidaniso kaDaniel Eldarovich abakhange bakhangele.
Kwisithombe u-Eldar Lebedev kunye nendodana yakhe
Akunabantwana abaqhelekileyo kunye noVeleriya Kabanova okwangoku, kodwa isibini esithile asifihla ukuba baphupha ukuzalisa intsapho. Nangona kunjalo, u-Eldar Lebedev uzama ubuncinane ukuba atyelele uKazakhstan. Namhlanje abazali bakhe kunye noodade abancinci ababini bahlala apho. Kungakhathaliseki ukuba umculi ophezulu akazange akhuphe umgangatho wenkqubela, u-Eldar Lebedev akacingeli ubomi bakhe ngaphandle kwentsapho, abantwana kunye nokufudumala kwekhaya.
Umfazi kaSergey Svetlakov yintlekele ebalulekileyo ebomini bomculi (iifoto zeentsapho ezingabonakaliyo)
Uthando lwentlondi yedwa: ubomi bobuqu beValery Leontiev
Ukupheka i-sturgeon kwi-oven ngokupheleleyo - zokupheka kunye neefoto
Iintlobo ezingezizo zendabuko zokuhlalisa abantu
UCameron Diaz (uCameron Diaz)
USophia Loren, onyamekela
I-Cheesecake enecocoa enomlilo
Indlela yokutya okufanelekileyo ukuba ibe yimilo
I-cream ye-ayisikrikhi kunye nabaqholi
I-Cream-soup evela enkukhu
Iipropati kunye nokusetyenziswa kweoli ye-apricot
Ukutya kwetiya zaseRussia
U-Anna Sedokova okhulelweyo ubonise umfanekiso kwi-swimsuit
Uthini umahluko phakathi kwebhola yebhola yebhola kunye nekhefu
I-Horoscope ye-Scorpio-amadoda ngo-2016 - uthando kunye nomnyaka wokuzalwa
Ukuphuhlisa umntwana, isithandathu isonto lokukhulelwa
Iimveliso kunye neqhekeza le-salon tanning